गायिका शाहको “झिलिमिली साझको बेलैमा” सार्वजनिक – Complete Nepali News Portal
गायिका शाहको “झिलिमिली साझको बेलैमा” सार्वजनिक
December 25, 2016	938 Views
कुमार “अविरल” पन्थी, काठमाडौ ।
लोक तथा दोहोरी गायिका इन्दिरा शाहको लोक तथा दोहोरी गीति एल्वम “झिलिमिली साझको बेलैमा” सार्वजनिक भएको छ । आशिष म्युजिक प्रा.लि.को प्रस्तुति रहेको गीति एल्बम “झिलिमिली साझको बेलैमा” युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपाली गित सङ्गीत क्षेत्रमा बढी माया प्रेम, ठट्यौली पाराका गितहरुले चर्चा कमाउने गरेका छन । भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको “झिलिमिली साझको बेलैमा” एल्बममा माया प्रेमका कुराहरु समेटिएका छन । एल्वममा विषेशत: प्युठान जिल्लाका विभिन्न प्रशिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मठ मन्दिरहरुको चर्चा गरिएको छ ।
गीतमा हिमालको चिसो हावा स्वर्गद्वारी लेकमा, चिनजानी गरौ आज माया अर्को भेटमा, झिलिमिली साझको बेलैमा…! माछा जस्तै माछी जालमा हामी फसे पछी, छुट्नै गार्हो हुदो रहेछ माया बसेपछि, झिलिमिली साझको बेलैमा…! जस्ता शब्दहरु सजिएका छन ।
“झिलिमिली साझको बेलैमा” एल्बममा गायक तथा सर्जक शरद पाण्डेले शब्द सङ्कलन गरेका छन् । पाण्डे यतिबेला रोजगारीको सिलसिलामा प्रदेशमा छन । प्रदेशमा रहेर पनि नेपाली गित संगितमा निरन्तर लागि रहेका पाण्डेले विभिन्न विधाका ४ दर्जन भन्दा बढी गीतमा शब्द कोरिसकेका छन् ।
त्यस्तै गायिका इन्दिरा शाह यतिबेला यसै एल्बमबाट निकै चर्चामा छिन । नेपाली संगीत क्षेत्रमा निरन्तरता दिदै आएकी गायिका शाहको यो छैठौ एल्बम हो । यसै एल्बमका गायक मेक्सम खाती गीत संगीतमा निरन्तरता दिदै पछिल्लो समय चर्चामा छन् । नेपाली गित संगीतलाई माया गर्ने कलाकारहरु विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेपनि नेपाली कला सस्कृतिलाई भुल्न सक्दैनन । बेला बखतमा आफ्ना प्रस्तुतीहरु लिएर दर्शक श्रोताहरुको माझमा आइरहेका हुन्छन ।
नरेश खातीको लय रहेको “झिलिमिली साझको बेलैमा” गीतमा मेक्सम खाती र इन्दिरा शाहले स्वर दिएका छन् । बब्बु थापाको निर्देशन तथा नबिन घर्तिमगरको सम्पादन रहेको भिडियोमा बब्बु थापा, करिश्मा, नोर्बु र इन्दिरा शाहले अभिनय गरेका छन । गीतको भिडियोलाई दुर्गा पौडेलले छायाँकन गरेका हुन । गितलाई आशिष म्युजिक प्रा.लि.ले बजार व्यवस्थापन गरेको हो ।